सरकारको अनुमतिबिना नै राष्ट्रसंघले गर्‍यो राजनीतिक सर्वेक्षण « प्रशासन
सरकारको अनुमतिबिना नै राष्ट्रसंघले गर्‍यो राजनीतिक सर्वेक्षण
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ।
राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले ‘प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस एक्ससाइज इन नेपाल’ (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको हो।
नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा केकस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको छ।‘प्रादेशिक संरचनामा जाँदा नेपालको संक्रमण, प्रादेशिक संरचनामा जाने प्रक्रिया, पहिचान, जातीयतालगायत मुद्दाले आगामी दिनमा कस्तो स्वरूप लिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले गोप्य अनुसन्धान थालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका लागि केही चरण बैठक सम्पन्न भएका छन् र सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ।’
राष्ट्रसंघले अनुसन्धानका लागि परामर्श बोर्डसमेत खडा गरेको छ । बोर्डमा संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. संगीता रायमाझी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललगायत छन्।
‘परामर्श बोर्डको बैठक भनेर एकदुईपटक बोलाएका थिए । त्यसपछि हामीलाई बोलाएका छैनन्,’ बोर्डमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक तामाङले भन।
राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयकी पूर्वसल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले पनि राष्ट्रसंघको सो अनुसन्धानलाई सघाइरहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्रसंघको अनुसन्धानमा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका आदित्य अधिकारीसमेत संलग्न छन् । ‘यसअघि आइडियाको विषयमा बैठक भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग छलफल गरेपछि अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ,’ अनुसन्धानमा सहभागी आदित्य अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार सर्वेक्षणका लागि ‘संविधान चित्त बुझेको छ कि छैन ? राजनीतिक नेता मन पर्छ या पर्दैन? कुन राजनीतिक दल मन पर्छ ? प्रदेश सीमांकन चित्त बुझेको छ कि छैन ? सीमांकन कसरी गर्नुपथ्र्यो’ जस्ता प्रश्न राखिएको छ । अनुसन्धान सन् २०१७ को मध्यबाट सुरु गरी सन् २०१८ को मध्यमा सक्नेगरी अघि बढाइएको स्रोतले बतायो । ‘नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान भइरहेको छ।
सामाजिक सद्भाव खलबलाउने उद्देश्यले अनुसन्धानको डिजाइन गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।देशको आन्तरिक विषयमा अझ संवेदनशील राजनीतिक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघले भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि सरकार भने यसबारे बेखबर छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले राष्ट्रसंघले नेपाल मामिलामा गरिरहेको यो अनुसन्धानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।